Thanksgiving | Waad ku mahadsan tahay deeqdaada – Abschir Hassan Foundation
Thanksgiving | Waad ku mahadsan tahay deeqdaada
Mudane Imfeld iyo qadarin Mr. Imfeld-Schön,
Aan maanta idiin sheegi doono si aan kuugu mahadceliyo. Iyada oo deeq-bixintaada aad ku faraxsanaan doonto carruurta badan ee carruurta. Ma sugi karo in carruurta iyo dhallinyarada ay siiyaan caruurtooda badan oo ay ku ciyaaraan iyo inay arkaan indhaheeda dhalaalaya.
Qaar badan oo ka mid ah caruurta iyo dhalinyarada soomaliyeed ee Soomaliya ma haystaan ​​wax qoryo ah, ha ahaadeen kuwo ku ciyaaraya boombaloyinka. Sidaa daraadeed, waxaan ku faanayaa inaan awood u yeesho in aan ka qaybqaato kaalin wax ku ool ah horumarinta wanaagsan ee carruurta iyo dhallinyarada leh caawimadaada. Taas macnaheedu waa wax aad u badan aniga. Waxaan rajeynayaa in aad dadka kale u sheegi doontid shaqadayada iyo inaad sii wadi doonto si firfircoon nooga caawiso.
Labadaba idinka mid ah ayaa aad uga mahadcelinaya deeqdaada iyo wadnahaaga weyn. Aad ayaan u faraxsanahay, anigana aniga iyo carruurta iyo dhallinyaradu ugu dambeyntiina ay khatar ku yihiin.